Spanish okwu usoro mmega | eactivo | Spanish maka kwabatara
Na…Gịnị ka ị na-eme na ụbọchị Mọnde?
Anyị nọ na December ihe ngwa ngwa oge na-aga! Anyị raara November-arụ ọrụ na a video abịa ngwa ngwa, ezigbo. Ma anyị adịghị achọ uche ogologo oge na-enweghị-azụ ihe omumu Blog ma si otú na-ị na-eji ọrụ n'aka, ebe a anyị na-ahapụ:
anyị podcast Na…Gịnị ka m na-eme na ụbọchị Mọnde? ka unu we ịmụta okwu metụtara eme kwa ụbọchị.
na ide Na…Gịnị ka ị na-eme na ụbọchị Mọnde?
Tags: A1 , ide , ntị , Spanish , Okwu
4 Comments “Na…Gịnị ka ị na-eme na ụbọchị Mọnde?”
March 4, 2013 na- 14:25
Hi, M Cuban na Spanish nkụzi na Greece, Ga-amasị m na-enweta gị email na onye ọ bụla ọhụrụ post n'ihi na m mkpa ihe n'ihi na m na klas na m hụrụ na-akpali a blog.
November 5, 2013 na- 12:11
Dị nnọọ mma ihe, Nke ka m ga-enweta ndị na n'ihi na Chinese ụmụ akwụkwọ Ekele!
Ike 1, 2014 na- 19:39
M na-ezi Spanish dị ka onye ọrụ afọ ofufo na-Morocco inyom na m mkpa ihe n'ihi na m na klas. M na-magburu onwe gị ihe onwunwe, M ga-ekele dị ukwuu maka bụrụ na ị nwere ike ịhapụ m ka m. Daalụ!
Ike 31, 2014 na- 21:49
Mari Carmen ekele gị nke ukwuu maka gị ikwu. Anyị ihe na-akpali anyị hụrụ ndị ọzọ bụ ndị na weebụ. Dị ka ihe atụ, Nahono (Morocco pụrụ iche akwụkwọ ntuziaka) Ọ bụ na paragraf “Mmuta”. M agba gị ume denye aha na anyị free blog na-enweta niile ihe onwunwe na anyị ga-ebipụta. Dị nnọọ tinye gị email na paragraf “Idenye aha” Ọ emi odude ke center kọlụm na njedebe nke na peeji nke. A ekele!
Jikọọ 65 ndị ọzọ ndị debanyere aha